အကောင်းဆုံး မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်းသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ , မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံသား၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ရန်နှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှရွှေဗီဇာ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ဒုတိယမြောက်ဗီဇာ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 100,000
မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘော်လကန်သည်ဥရောပအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသောဗားမောင့်နယ်မြေထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ကမ္ဘာ့အင်အားစုများကိုပုံမှန်လျစ်လျူရှုကာမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်လူ ဦး ရေ ၂.၀၇ သန်းမျှသာရှိသော်လည်းဂရိနိုင်ငံကဲ့သို့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်လှေများရှိသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သောရိုမန်လူမျိုးများပါ ၀ င်သည်။ ရိုမာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသားအရောင်ခွဲခြားခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြုမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပြီးအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်ရာထူးနေရာများရရှိရန်မသင့်တော်ပါ။ ၁၉၉၄ တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားအစိုးရသည်ရိုမာဘာသာစကားကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မှတ်မိခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ၄ တန်းကျောင်းများသည်ရိုးမားဘာသာစကားကိုသူတို့၏ပညာရေးအစီအစဉ်အတွက်သတိရသည်။ အစိုးရ၏ရိုမာတို့၏ပုံသဏ္2.07ာန်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၀.၆ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏မြို့တော်စလိုပီးမြို့တွင်ပြသမှုအရလက်ရှိတွင်ကောလိပ်များတွင်ရိုမာခွဲစိတ်မှုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်နှင့်အဆင့်မြင့်သည့်လူငယ်များ ၅၀-၆၀ အရွယ်များရှိသည်။ ပညာရေး။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရှိသောလူ ဦး ရေ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာယေဘူယျအားဖြင့်ရောမလူမျိုးသည်တရားဝင်အိမ်များမရှိဘဲနေထိုင်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးများဖြစ်သောရေ၊ ID မရှိပါကဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အကာအကွယ်၊ လူမှုအာမခံချက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရရှိနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အနီးအနားရှိအသင်းအဖွဲ့များသည် Roma SOS သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဥပမာ Habitat for Humanity နှင့်အတူလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုသေးငယ်သောတိုးတက်မှုများရရှိရန်နှင့်ခွင့်ပြုချက်သံသရာကိုနားလည်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကိုရယူလိုက်သောအခါဂရိနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားဟူသောအမည်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားပါလီမန်သည်မြောက်ကိုရီးယားမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အမည်ပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပြီးဂရိပါလီမန်၏အမည်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ဤအမည်ပြောင်းလဲမှုသည်နိုင်ငံအားမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ (NATO) တွင်ပါ ၀ င်မှုပိုမိုနီးကပ်စေလိမ့်မည်။ နေတိုးမှလူတစ် ဦး အနေဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားများ၏နေထိုင်မှုဘ ၀ တိုးတက်စေရန်အတွက်လုံခြုံရေးနှင့်နောက်ထပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအာမခံချက်ရှိသည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားလူငယ် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်မူလတန်းကျောင်းမတက်ကြပြီး ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရန်ကျောင်းသို့မသွားကြပေ။ တရားစီရင်ခြင်းသည်လူငယ်များကျောင်း၏ပါ ၀ င်မှုအပေါ်မကြာခဏလွှမ်းမိုးသည်။ အနည်းဆုံးကံဇာတာအဖြစ်ဆုံးကလေးများရဲ့ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာမူလတန်းကျောင်းကိုမတက်ကြဘူး။ အနည်းဆုံးကံစမ်းမဲကွဲမှုရပ်ကွက်ရှိကလေးများ၏ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းသောကလေးများသည်သူတို့နှင့်မတူသောကြောင့်အရန်ကျောင်းအတွက်အပေါက်များများလာသည်။ သာမန်ထက်သာလွန်သောအကျယ်အကျယ်အ ၀ န်းရှိလူငယ် ၇ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေမူလတန်းကျောင်းများ၏ပြီးမြောက်မှုနှုန်းမှာ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမြင့်မားပြီးအရန်ကျောင်းအား ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်လုပ်သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုစည်းမျဉ်းများချမှတ်ပြီးရုံးများကိုပြင်ဆင်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျန်းမာရေးပညာရေး (CME) ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်နေထိုင်သူတိုင်းသည်ပြည်နယ်မှတစ်ဆင့်မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူတရားမဝင်နေထိုင်သူများသည်နိုင်ငံပိုင်မှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနေထိုင်သူအားလုံးထံမှအခွန်အခများပေးသည့်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်သည်အခမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ညွှန်ပြမှုနှင့်ကုသမှုပေးသည်။ ၎င်းတွင်အကောင်းအဆိုးအထူးကုများနှင့်ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုမူဘောင်သည်ပုံမှန်နေထိုင်သူအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်များသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော (သို့) ပိုမိုမြန်ဆန်သောကုထုံးနှင့်လက်တွေ့ကုသနည်းများကိုပေးနိုင်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်သေဆုံးရခြင်း၏အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာသွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လမ်းကြောင်းအားလုံး၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည့်နီရိုပလပ်စ်၊ ဒဏ်ရာများ၊ ထိခိုက်မှုများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် endocrine မူဘောင်၏ရောဂါများဖြစ်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ပုံမှန်အားလုံးသောအနာဂတ်သည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးအီးယူရှိနိုင်ငံများနှင့်မတူပဲ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား၏ခိုင်မာသောအနာဂတ်သည်ဂရိနိုင်ငံ၏နောက်ရှစ်နှစ်ခန့်သာဖြစ်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသောသွေးတိုးရောဂါနှင့် hypercholesterolemia ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လတွင် ၂၁.၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။ ဆက်စပ်မှုအရ၊ ဂရိနိုင်ငံတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်inပြီလတွင် ၂၀.၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအလုပ်သမားသည် ၆၆၇.၅၅ ဖြစ်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်ကုလသမဂ္ဂ၏သိသိသာသာများပြားသောနောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းတစ်လနှင့်တစ်လအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာသည်ဒေါ်လာ ၃၇၀.၉၆ ဖြစ်သည့်အတွက်နိုင်ငံသည်တိုးတက်လာသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားပြည်သား ၂၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပြမျဉ်းအောက်တွင်နေထိုင်နေကြပြီးမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၉ နိုင်ငံ၏နေရာတွင်ရှိသည်။ အနည်းဆုံးလူ ၅ ဦး ရှိသောမိသားစုများသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားပြည်၏ ၄၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်လိုအပ်မှုကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, မက်ဆီဒိုးနီးယားက၎င်း၏စျေးကွက်စီးပွားရေးနှင့်အတူမြေပြင်ရရှိခဲ့သည်နှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကျဆင်းသွားသည်နှင့်အတူ, 2015 ခုနှစ် 21.5 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကနေလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်သို့ဆွဲထုတ်။
လူ ဦး ရေ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာအာဟာရချို့တဲ့မှုနှင့်သောက်သုံးရေ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကိုလုံလောက်စွာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုခံနေရသောကြောင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်စားစရာနှင့်ရေကိုယေဘူယျအားဖြင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အများပြည်သူအာဏာပိုင်များသည်များသောအားဖြင့်လယ်ယာမြေများနှင့်လယ်ယာမြေများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောကန့်သတ်ချက်၊ သောက်ရေကန်များ၊ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဟန့်တားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းသောလူငယ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အနေအထားအတွက်မှန်ကန်သော ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်၌ရှိနေပြီး ၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းသောကလေးငယ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အသက်အရွယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး ၁၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းသောကလေးများသည်အဝလွန်ကြသည်။ Global Nutrition Report မှမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဖျားနာမှုအခြေခံအကျဆုံးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအနီရောင်ဥမင်နံရံများနည်းပါးခြင်း၊ ဤပြissuesနာများရှိနေသော်လည်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသည်လူ ဦး ရေ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိအားဖြင့်အာဟာရချို့တဲ့မှုကိုလျှော့ချရန်အခွင့်အလမ်းများရရှိခဲ့သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြေခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မက်ဆီဒိုးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
လူနေမှု 8 နှစ်ပြီးနောက်
ဘာကြောင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုသွားရမှာလဲ
မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥရောပအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဖော်ရွေသောစီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်တိုက်ကြီးတွင်စီးပွားရေးအရအခွန်အနိမ့်ဆုံးရှိသည်။ ထိုနိုင်ငံသည်အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရန်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီးမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအား Schengen ဇုန်သို့အခမဲ့ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနေထိုင်မှုအစီအစဉ်သည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာမြင့်သောအချိန်ကာလအတွင်းကျော်ကြားသည်။
Residency မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
မက်ဆီဒိုးနီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာတင်ပြီးသုံးပတ်အတွင်းနေထိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိလိမ့်မည်။ ဤခွင့်ပြုချက်သည်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့် ၃ နှစ်ရပြီးနောက် ၈ နှစ်အကြာမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
သင်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုမက်ဆီဒိုးနီးယားစီးပွားရေးတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။ ထို့အပြင်သင်သည်အနည်းဆုံး ၁၀ မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားကိုခန့်ထားရမည်။ သင်၏အပလီကေးရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သောမိသားစု ၀ င်အရေအတွက်နှင့်သက်တမ်းအပေါ် မူတည်၍ အပြောင်းအလဲသည်အခကြေးငွေဖြစ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားကို ဖောက်သည်များနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရနိုင်ငံသားပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်းသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှရွှေဗီဇာ (သို့) မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည့်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ငါတို့တတ်နိုင်တဆင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်, မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှ ၃၇ နိုင်ငံအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့နေထိုင်ရာအတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုလျှင်ထောက်ပံ့မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ကန ဦး အစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့ရှေ့ဆက်သွားရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပယ်လ်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများနှင့်ရွှေဗီဇာသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency လျှောက်ထားခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါကသက်ဆိုင်သောမက်ဆီဒိုးနီးယားအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration:3ရက်သတ္တပတ်
မက်ဆီဒိုးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နည်းပညာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းအားဖြင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားကို မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်သိုလှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားများအတွက်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားကို တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု မက်ဆီဒိုးနီးယားကို မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မက်ဆီဒိုးနီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယား၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သောနှုန်းဖြင့်ဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားပြည်သူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောမက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်သင်၏နေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးမက်ဆီဒိုးနီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သင်၏မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နေထိုင်မှုပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ မက်ဆီဒိုးနီးယားကို
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်၏မိသားစုနှင့်အတူမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိနေသည်။
Residency မှလွဲ၍ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှအခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်မတွေ့ရပါ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ )
မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် မက်ဆီဒိုးနီးယားကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, မက်ဆီဒိုးနီးယားကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင် Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ပြီးနောက်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မက်ဆီဒိုးနီးယား.
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင် Web Design
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီး၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ရပ်များအတွက်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျနယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်စတေးလ်သို့မဟုတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှာ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေမက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာမက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | မက်ဆီဒိုးနီးယားမှတတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုမက်ဆီဒိုးနီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရား ၀ င်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်းစသည်တို့ကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှထောက်ပံ့သောရွှေဗီဇာအစီအစဉ် မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားမှအေးဂျင့်များသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာ Residency သည်အာရှမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Residency သည်အာဖရိကမှမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှမက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ယူအေအီးမှမက်ဆီဒိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု မက်ဆီဒိုးနီးယားကို
မက်ဆီဒိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.mfa.gov.mk
အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကော်မရှင် - www.dksk.org.mk
အများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မရှင် - www.sinf.gov.mk
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းအေဂျင်စီ - www.ads.gov.mk
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.mtc.gov.mk
ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီ - www.adi.gov.mk
လစာတစ်ခုလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း - www.celaplata.mk
စာတိုက်အေဂျင်စီ - www.ap.mk
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း ၀ န်ကြီးဌာန www.moepp.gov.mk
ငွေခဝါချမှုတားဆီးရေး ဦး စီးဌာန - www.dspp.gov.mk
စွမ်းအင်စည်းမျဉ်းဥပဒေကော်မရှင် - www.erc.org.mk
ပညာရေးနှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာန www.mon.gov.mk
စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.economy.gov.mk
RM ၏ဗဟိုမှတ်ပုံတင် www.crm.com.mk
အကောက်ခွန်အုပ်ချုပ်ရေး - www.customs.gov.mk
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ -www.zvvrm.gov.mk, www.avrm.gov.mk
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီ - www.minisel.gov.mk
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန - www.kultura.gov.mk
ယှဉ်ပြိုင်မှုကာကွယ်ရေးကော်မရှင် - www.kzk.gov.mk
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ကြီးဌာန www.mzsv.gov.mk
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီ - www.investinmacedonia.com
အလုပ်သမားနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.mtsp.gov.mk
မက်ဆီဒိုးနီးယားသမ္မတ၏တရားဝင်ပြန်တမ်း - www.slvesnik.com.mk
ရုံးများ၊ အေဂျင်စီများနှင့်ကော်မရှင်များပြည်သူ့အခွန်ရုံး - www.ujp.gov.mk
၀ န်ကြီးဌာနများပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန - www.moi.gov.mk
ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဗျူရို - www.javni-nabavki.finance.gov.mk
ဒေသန္တရကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန - www.mls.gov.mk
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာန - www.dzlp.gov.mk
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ - www.aek.mk
စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီ - www.agencija.gov.mk
အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများ - www.uslugi.gov.mk
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုအတွက်အေဂျင်စီ - www.apprm.gov.mk
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန - www.pravda.gov.mk
ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံဗျူရို - www.bsr.gov.mk
စွမ်းအင်အေဂျင်စီ - www.ea.gov.mk
link ကိုမှ မက်ဆီဒိုးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , မက်ဆီဒိုးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်